Jaranjarada Xirashada 300 Dredge ayaa buuxisa Geotubes - Ellicott Dredges Blog
Lake Kittamaqundi- Ellicott® Nooca 300 Swinging Ladder Dredge waxaa loo adeegsan jiray in lagu buuxiyo Geotubes iyo Meelaha Biyo La'aanta ah
Waxaa laga yaabaa 1, 1996
Source: Macdanta iyo Dhismaha Adduunka
Harada Kittarnaqundi waa 27-ac. kayd biyood oo ku yaal Columbia, Maryland, oo caan ku ah mid ka mid ah magaalooyinkii ugu horreeyay qorshaysan-uguna guusha badan America. Guga 2010, Ururka Columbia, milkiileyaasha harada, waxay kiraysteen Cashman si ay u nadiifiyaan qashinka iyo haramaha soo ururay tan iyo markii la dhisay harada. Kooxda Cashman waxay joojiyeen mashruucii, waxay cadeeyeen laba caqabadood oo xagga saadka ah, waxayna bilaabeen qorsheyn faahfaahsan oo awood u siineysa inay howsha dhameystiraan.
Ellicott® Brand 670 Dredger oo ka shaqeeya harada Lake Kittamaqundi
Marka hore, Kittamaqundi waxaa ku xirmay wasmo biyo ah (hydrilla vertieillata) - haramaha biyaha leh ee laamo badan leh waxay si fudud u gaari karaan dhererkooda 25 ft. Awoodaan inay iskood isku fidiyaan ka soo baxaan ilaa dusha sare, dhirtan xawaareynaya ayaa sameysma sariir cufan, oo aakhirkii farageliya socodka caadiga ah ee biyaha. Sababtoo ah hydrilla waxay qarin kartaa dhirta kale ee cilmiga dabiiciga ah waxayna runtii wax ka beddeli kartaa kiimikada biyaha iyo heerarka oksijiinta, waxay ku qoran tahay Liiska Xad-dhaafka ee Federalka ee Mareykanka. Xirfadlayaal khibrad leh oo qulqulaya ayaa si aad ah u wada ogsoon in hydrilla ay masiibo ku dumin karto qalabka dewatinka, si weynna u gaabinaysa xawaaraha shaqada. Tan kaliya maahan; maxaa yeelay warshadda si sahlan ayey uga soo kaban kartaa jajabyada asliga ah, waa in si taxaddar leh looga saaraa. Cashman wuxuu go’aansaday inuu goosto harada, kana saaro qashinka burburka xeebta hoose iyo harada hoose. Mar haddii tan la sameeyo, qulqulaya si habsami leh ayay u socon kartaa.
Singing Ladder Dredger ayaa loo adeegsan jiray in lagu buuxiyo Geotubes iyo Biyo dhaaminta Biyo-xidheenka
Midda labaad, si loo yareeyo carqaladeynta nolosha maalinlaha ah ee dadka deggan agagaaraha, goobta wax lagu kaashado ee goobtan gaarka ah waa in lagu hayaa lugta ugu yar ee suurta galka ah. Caqabadaani waxaa lasiiyay feejignaan culus maadaama qorshaha mashruuca la hormariyey. Baadhitaanka goobta ayaa muujisay in maaddooyinka la kala duway ay aad ugu kala duwan yihiin qaybaha; aagagga qaarkood waxaa lagu dhajiyay superfine silt; kuwa kale, hoose waxay ahayd mid aad u adag oo ciid ah. Dib u dhigida labada nooc ee walxaha waxay ahayd lagama maarmaan, sida had iyo jeer ay tahay (si loo yareeyo tolmada) marka alaabada qashin qubtay ay tahay in lagu rido laguna tuuro qashin qubka. Ka dib markay tixgeliyaan cabbirrada mashruucu guud ahaan, maareeyayaasha Cashman waxay doorteen hanaan isku-dhafan oo dib-u-dhac ah.
Waxay keeni lahaayeen cutubka mashiinka qashin-qubka iyo miiraha filterka ee loogu talagalay iskudarta maraqa oo laga soo qaaday aagagga xariifka ah, oo lagu ridayo xawaashka iyadoo ay ka soo baxayaan qaybta tuubada biyaha iyo saxaafadda. Dhanka kale, qalabka wax lagu xareysiiyo waxaa si toos ah loogu duubi lahaa 200 ft dheer, 50-ft dhexroor dhexdhexaad ah. In kasta oo loo yaqaan 'geotubes' iyo 'flocculant treatment' ayaa sidoo kale laga yaabaa inay ka shaqeyn karaan hagaajinta finanka, iyadoo la isticmaalayo geotubes si gaar ah waxay u baahnaan laheyd in lagu faafiyo mashruuca meel ballaadhan. Adeegsiga isku-darka unugyada tuubooyinka mashiinka iyo geotubes waxay u suurtagashay Cashman inay ku xajiso goobta qashin-qubka aagga qiyaasay wax ka yar acre.
Shaqaalaha Cashman, markay yimaadeen goobta, waxay si dhakhso leh u xuseen arrin kale - oo laga yaabo inaysan walaac weyn qabin, laakiin xitaa sidaas oo ay tahay, mid saamayn ku leh tayada nolosha dadka deegaanka inta lagu jiro usbuucyada hawsha qodista ayaa socota: waddo socod badan oo la isticmaali lahaa in laga xidho. Kooxda mashruuca waxay si dhakhso leh ula yimaadeen xal lagu qanco. Kahor intaadan xeyndaabin wadada socodka, shaqaalaha Cashman waxay raad ku dhex mareen kaymaha u dhow waxayna ku faafiyeen lakab jajab ah oo alwaax ah sidaa darteed dadka caadeystay isticmaalka wadada cagta hareeraha harada waxay helayaan meel ay ku aadaan socodkooda maalinlaha ah.
Waa feejignaanta noocan oo kale ah ee ku saabsan faahfaahin kasta - ka hor intaanay shaqadu bilaaban xitaa - taas ayaa ka dhigaysa farqiga u dhexeeya in shaqada la dhammeeyo iyo in lagu dhammeeyo sida ugu fiican ee ugu macquulsan. Qodista waa shaqo qaali ah, maalgashi weyn. Macaamiisha waxay filayaan in qandaraasluhu uu dhameeyo shaqada oo uu si sax ah u dhammeeyo, iyadoo dhammaan caqabadaha farsamo lala kulmay.
Intaas ka sokow, maareeyayaasha Cashman waxay rumaysan yihiin, aasaaska dhabta ah ee qancinta macmiilka iyo, ugu dambeyntiina, sumcadda shirkadda, waxay kuxirantahay waxyaalaha lama-taabtaanka ah iyo kuwa aan la qiyaasi karin: ka ilaali bulshada ay dhibaatadu ka soo gaadhay carqaladaynta looga hortegi karo ee noloshooda; Hayso amarrada beddelka ugu yaraan ugu yaraan; iyo sida shaqadu u socoto, ku noolow kalsoonida macmiilka ee khibradda kooxda qashin qubka. Waxaas oo dhan waxaa lagu fulin karaa oo keliya iyadoo laga fekero iyo qorshe dhammaystiran.
Waxaa laga daabacay macdanta iyo Dhismaha adduunka ee DARRADA